« Lalao izay tiako indrindra » : Hofaranana amin’ny 5 ora hariva ny seho ataon’i Lalatiana -
AccueilVaovao Samihafa« Lalao izay tiako indrindra » : Hofaranana amin’ny 5 ora hariva ny seho ataon’i Lalatiana
« Lalao izay tiako indrindra » : Hofaranana amin’ny 5 ora hariva ny seho ataon’i Lalatiana
Efa vonona ny rehetra ary efa eto an-toerana ny nandrasana. Tato anatin’ny andro maromaro dia efa miatrika famerenana amin’ireo mpihira sy mpitendry hanotrona azy amin’ilay seho « Lalao izay tiako indrindra » i Lalatiana. « Efa nisy ny famerenana nataon’izy ireo fa fampiarahana izany no ataonay sisa », araka ny fanazavan’i Lalatiana, raha niresaka ny seho atolony etsy amin’ny Lapan’ny fanatanjahantena Mahamasina ny alahady izao, amin’ny 2 ora tolakandro. « Efa tonga ny fotoana hifankahitana amin’ireo mpankafy taorian’ny sampona ny volana oktobra tamin’ny taon-dasa », hoy ihany izy maneho ny fahavononany hiatrika io seho io. « Hanomboka amin’ny 2 ora tsy diso ary hofaranana amin’ny 5 ora hariva ny seho », hoy kosa Hery Randriamampianina, Talen’ny m’Ritsoka, mpikarakara ny fampisehoana, izay natao hitsinjovana ireo sady mpankafy Lalatiana no mpanaraka ny baolina kitra.
Mpitendry sy mpihira avy eto an-toerana maromaro no hanara-dia azy amin’io fampisehoana io ankoatra an’i Rija Randrianavonisoa, izay mpitendry gitara mpanaraka azy. Enina taona lasa izay no nahitana farany an’i Lalatiana tamin’ny seho goavana toa izao, raha teny anivon’ny seho takariva samihafa no nahitana azy tato anatin’ny taona vitsivitsy. Ampolony ireo mpitendry hanara-dia azy amin’io fampisehoana io. Ankoatra ireo zava-maneno efa mahazatra, dia anisan’ny hanome ainga vao ireo hiran’i Lalatiana ny fisian’ireo zava-maneno tsofina hiangalian-dry Andriniona sy Tsanta ary Andry Mika sy ireo mpitendry lokanga ahitana an’i Mamiliva sy Vololona. EFa mpiara-dia taminy tamin’ireo seho teo aloha kosa ry Solofo Bota sy Njaka (Vata maroafitsoka), Nini (Amponga maroanaka) ary Henintsoa (Gitara beso). Hanampy eo amin’ny feo lafika kosa ny Anaa Quartor. Ezahin’i Lalatiana hoentina amin’ny fampisehoana ireo tsiahy rehetra niainany teo amin’ny sehatry ny mozika, ka hiangaliany ireo hira nanamarika izany. Tsy hohadinoina koa anefa ny ampahany amin’ireo hira taloha novelominy ao amin’ilay rakikira « double sento », sy hira vaovao vitsivitsy.